Furatsilin ट्याब्लेटको कसरी पाल्नु गर्न? Furatsilin - घर निर्देश पुस्तिका मा
अभिभावक फोरम मा अक्सर प्रश्न सोधे: "? furatsilin ट्याब्लेटको कसरी पाल्नु गर्न"
यो दबाइ सबैभन्दा लोकप्रिय यस्तो, मुख र घाँटी, आँखा (conjunctivitis) को सुनिंनु rinsing सानो घाउ धोइदिनुभएर रूपमा, घर उपचार को माध्यम बीचमा छ। बच्चाहरु परिवार छन्, विशेष गरी यदि कुनै पनि घर चिकित्सा कैबिनेट छ उपयोगी furatsilina समाधान। तर यस्तो चिकित्सा मा एक धेरै सीमित समय, त्यसैले धेरै सुविधाजनक हातमा कुनै पनि क्षण मा पानी संग पतला गर्न सकिन्छ जो एक ट्याबलेट, छ छ।
यो औषधीले के हो?
Furatsilin कृत्रिम मूल को जीवाणुरोधी एजेन्ट बताउँछन्। घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने र निस्संक्रामक कार्य (pharmacological प्रभाव - रोगाणुरोधी)। दबाइ लागि अर्को नाम - "Nitrofuran" वा "Hemofuran"। अन्तर्राष्ट्रिय nonproprietary नाम - Nitrofural।
Furatsilin जीवाणु मूल (जस्तै, झाडापखाला) को जठरांत्रिय पर्चा को तीव्र संक्रमण प्रयोग गरिएको। abrasions, ओछ्यानमा sores, संक्रमित घाउ, अल्सर, डिग्री म-द्वितीय, गलसुआशोथ, मुख र घाँटी, जीवाणु conjunctivitis को बीचमा कान mucosa को सुनिंनु को बल्न लागि प्रयोग दबाइ समाधान को बाहिरबाट।
Furatsilin जो एक औषधि पसल मा खरिद गर्न सकिन्छ पेस्ट वा 25 ग्राम को पैक मा 0.2% मलम -th, र पानी संग dilution लागि पाउडर को रूप मा discharged। यसलाई आफ्नो घर चिकित्सा मन्त्री furatsilin मा छ सबै भन्दा राम्रो छ - ट्याब्लेटको। प्रयोगको लागि निर्देशन धेरै सरल छ र तपाईं भन्नेछु कसरी furatsilin प्रकार गर्न ट्याब्लेटको।
तिनीहरूले 0.02 जी र 0.1 ग्राम वजन द्वारा उत्पादित गर्दै छन्, एक तीतो स्वाद र yellowish रंग छ। पहिले furatsilin प्रकार कसरी ट्याब्लेटको यस्तो समाधान, घरमा तयार बाह्य प्रयोग मात्र लागि उपयुक्त छ कि सम्झनुपर्छ! उपचारका लागि Contraindications तिनीहरूले idiosyncrasy, अतिसंवेदनशीलता, साथै गर्भावस्था र स्तनपान हुन सक्छ। सम्भव साइड इफेक्ट dermatitis बन्न सक्छ।
त्यसैले तपाईं कसरी चक्की को समाधान furatsilina प्राप्त गर्छन्? nitrofural - एक ट्याब्लेट सक्रिय संघटक को 0.02 जी समावेश गर्दछ। एक जलीय 0.02% समाधान (1: 5000) तयार गर्न, यस्तो ट्याब्लेट 100 एमएल (आधा कप) पानी मा भंग हुनुपर्छ। तरल आवश्यक उसिनेर हुनुपर्छ। उच्च तापमान, को को dissolution प्रक्रिया हुनेछ छिटो। अझ राम्रो पाउन्ड पूर्व रूपमा सूक्ष्मता सकेसम्म ट्याबलेट, अर्थात्। K. एक सम्पूर्ण अब घुल।
प्रयोग गर्नु अघि, कोठा तापमान समाधान शांत। तपाईं दिनमा गर्न सक्छन्, घर मा यो राख्नुहोस्।
तपाईं एक बाँझ समाधान उत्पादन गर्न चाहेको छ भने, पानी को सट्टा नुनखरा वा distilled पानी, जो एक औषधि पसल मा खरिद गर्न सकिन्छ लिनुपर्छ। आफ्नो अभाव, तपाईंले साधारण पानी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसपछि परिणामस्वरूप समाधान आधा एक घण्टा उसिनेर गर्नुपर्छ।
Gargling - घर मा यो दबाइ प्रयोग को सबै भन्दा साधारण भेद। कोठा तापमान गर्न कुल्ला समाधान प्रयोग गर्न (चिसो कुल्ला सिफारिस छैन)। पहिले सोडा समाधान rinsing, संचित स्लाइम को साफ मनमोहक को घाँटी को प्रभाव बृद्धि गर्न। पनि कैलेंडुला एक रक्सी समाधान केही घटेको दबाइ तुरुन्तै प्रयोग गर्न पूर्व थपियो दबाइ को कार्य बढाउँछ।
कसरी furatsilin तपाईं पानी र रक्सी समाधान चाहनुहुन्छ भने, पाटी प्रकार गर्न? दबाइ को यस प्रकार को लागि 1 एक अनुपात मा रक्सी दल्नु लिन: 5000. यो समाधान लामो समय को लागि भण्डारण हुन सक्छ, र जब यो ठीक वस्तुतः असीमित आफ्नो जीवन भण्डारण गरिएको छ।
जारी सबै प्रकारका मा Furatsilin प्रकाश सुरक्षित, एक सुन्दर सुक्खा ठाउँमा भण्डारण गर्नुपर्छ। एक फ्रिज भण्डारण गर्न आदर्श ठाउँ। उचित भण्डारण आफ्नो जीवन furatsilina ट्याब्लेटको5वर्ष छ।
Digitalis तयारी: हृदय रोग मा सङ्केत गर्छ र प्रभाव
दबाइ 'Complivit क्याल्सियम D3'। निर्देशन
दबाइ "Biotredin"। प्रयोगको लागि निर्देशन
बस बारेमा "Bonviva": विरामीहरु लागि निर्देशन
गर्ड: लक्षण, लाक्षणिकता, वर्गीकरण र उपचार
कपडा लागि एक्रिलिक पेंट्स
दिन Orthodoxy मा पवित्र Myrrh-असर महिला को। प्रतिमा "को चिहान मा महिला Myrrh-दिइरहेका"
को erythrocyte अवसादन दर वृद्धि भने जसको अर्थ?
लेजर छाला Resurfacing
"सेतो फेंग" पुस्तक ज्याक लन्डन द्वारा को समीक्षा
नरोडनिक्स को हुन् र तिनीहरूको गतिविधि के हो?
बच्चाको छाला मा दाना।
भोल्टेज 12-220 को कनवर्टर। आफ्नै हातको साथ भोल्टेज कनवर्टर
Foreplay के हो?
टर्की मुद्रा र रूसी संघ को लागि आफ्नो मूल्य